Mety tena hankarary an-doha ny miray ara-nofo !
Lalan-kafa mankany amin’ny lanitra faha-7…
Rehefa hanafosafo ny olon-tiany ny vehivavy, mandritra ny firaisana ara-nofo, dia matetika no mivantana avy hatrany any amin'ny taovam-pananahan’ilay lehilahy.
Misafosafo amin’ny lela …
Fomba iray tanterahina ao anatin’ny firaisana ara-nofo ary entina hanaitairana ny vehivavy ao anatin’ny savaranonando, indrindra indrindra, ny « cunnilingus ». Azo lazaina ho mizara ihany ny hevitry ny lehilahy amin’ny fanatanterahana azy io, saingy ny ankamaroany dia mankafy izany.
Filàna ara-nofo, taitairin’ny fofona !
Mitana anjara toerana lehibe ny fofona, eo amin'ny fananahana. Mety mahatonga antsika ho voasintona amin'olona iray izy io, nefa mety tsy hitiavantsika olona iray ihany koa. Tsy azo atao ambanin-javatra, noho izany, ny fofona avoakan'ny vatana sy ny fivaviana. Andao fantarina ny tsiambaratelony !
Fahadisoana 4 tsy tokony atao intsony
Misy fomba fiheverana malaza izay manao hoe : tsy misy vehivavy tsy liana amin’ny firaisana ara-nofo, fa ny lehilahy tsy mahay mampianoka no misy.
Mahatsara ny fiainam-pananahana ny “masturbation”
Mahamenatra ary fahotana mihitsy aza, ho an’ny olona sasany, izany fanomezana fahafinaretana samy irery ny tena izany.
Isan’ny ala-olana iray fanaon’ny vehivavy ny milaza ho marary an-doha, rehefa malaina ny hiray ara-nofo. Fa io fanaovana firaisana ara-nofo io mihitsy koa anefa no tena mety hitarika aretin’an-doha, ho an’ny vehivavy sasany. Nitondra porofo momba izany ny manam-pahaizana avy ao amin’ny Mayo Clinic any Minnesota Etazonia.
Marary hatrany amin’ny hatoka
Ilay karazan’aretin’an-doha antsoina hoe : “migraine” no mety hiseho eo amin’ny vehivavy, mandritra ny fanaovana firaisana ara-nofo. Ny ila-loha no tena marary amin’izany, amin’ny ankapobeny, ary tsapa hatrany amin’ny hatoka ny fanaintainana. Tsy aretin’an-doha foronina, vokatry ny hakamoana hiray ara-nofo izy io, fa tena misy ary tena maharary. Tsy mbola tena fantatr’ireto manam-pahaizana ireto anefa ny antony mahatonga ity antsoiny hoe : “aretin’andoham-piraisana” ity. Heverin’izy ireo kosa fa mety ho noho ny fiakaran’ny tosi-dra sy ny fiitaran’ny lalan-dra, vokatry ny fientanana, no mitarika azy. Mety ho vokatry ny fikainkonan’ny hozatra, izay mitranga mialoha kely na mandritra ny fahahetsahana ihany koa anefa.
Azo sorohina amin’ny fanafody
Tsy misy atahorana akory ity karazan’aretin’andoha ity, hoy ireo manam-pahaizana. Raha miseho matetika izy io, isaky ny miray ara-nofo, dia afaka mangataka fanafody miady amin’ny fanaintainana, amin’ny dokotera, izay hanina mialohan’ny hanaovana firaisana, ho fisorohana. Na izany aza, raha olona tsy mpanao “migraine” mihitsy no isehoan’ity “aretin’andoham-piraisana” ity matetika, dia tokony hanatona mpitsabo ihany hozahana. Sao mantsy manafina aretina hafa mihitsy io aretin’andoha io, toy ny “anevrisme cerebral”. Mety mahafaty ity tranga iray ity, izay miseho amin’ny fiitaran’ny lalan-drà tsikelikely, ka tokony hotsaboina haingana raha izany no miseho.
Firaisana, misoroka aretin’an-doha
Efa nisy fikarohana nanaporofo ihany koa anefa fa manasitrana ny aretin’an-doha “migraine” ny fanaovana firaisana ara-nofo, eo amin’ny olona sasany. Azo andramana, araka izany, ity fanafody tsy andoavam-bola sady mahafinaritra ity, sao mandaitra amin’ireo olona sasany izay matetika ipoiran’nyy fanaintainana any amin’ny ila-loha. Rehefa ilay marary iny ny loha dia aza tonga dia mandà avy hatrany ny hifampizara fitiavana amin’ilay olon-tiana, fa avelao ny safosafony sy ny teny maminy aloha mba hiasa, sao mety mahasitrana !